पारिश्रमिकमा नम्रताले साम्राज्ञीलाई उछिनिन् तर यो होड कहिलेसम्म ? « Ramailo छ
पारिश्रमिकमा नम्रताले साम्राज्ञीलाई उछिनिन् तर यो होड कहिलेसम्म ?
नायक आर्यन सिग्देलको ‘कायरा’मा अहिलेकी हटकेक नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले दश लाख रुपियाँ लिइन । यो पारिश्रमिकले उनलाई सर्वाधिक महंगो हिरोइनका रुपमा स्थापित गरायो ।
तर, नायिका नम्रता श्रेष्ठले साम्राज्ञीलाई उछिनेको खबर छ । फिल्म वृत्तमा छाएको चर्चा अनुसार नम्रताले ‘प्रसाद’बाट १५ लाख पारिश्रमिक पाएकी छिन् । भन्नै परेन, यो रकम ‘कायरा’बाट साम्राज्ञीले पाए भन्दा पाँच लाख बढी हो । दिनेश राउतको निर्देशन र सुभाष थापाको निर्माण रहेको ‘प्रसाद’मा कलाकारको पारिश्रमिकमा मात्रै ५५ लाख सकिएको बताइन्छ । हुन त नायक अनमोल केसीले मिलन चाम्स र सुदीप खड्काले बनाउने फिल्म ‘ब्याच्लर बन्टी’मा सेयर सहित पचास लाख लिएर फिल्म बजार तताइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय कलाकारबीच महंगो पारिश्रमिक बुझ्ने होडबाजी देखिन्छ । एक समय नायक आर्यन सिग्देलले दश लाख पारिश्रमिक लिंदा धेरै पैसा लियो भनेर आलोचना हुने गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय स्टार कलाकारले दश लाख लिनु सामान्य हुन थालेको छ । उल्लेखनीय तथ्य चाहीं महंगा भनिएका सबै स्टारको फिल्मले दर्शकलाई हलसम्म आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तो : नम्रताकै कुनै फिल्म सुपरहिट भएको छैन । विपिन कार्की अभिनीत पछिल्लो फिल्म ‘हरि’ पनि फ्लप भयो । अनमोल केसीकै ‘कृ’ले निर्मातालाई नाफा दिन सकेन । ‘लिलीबिली’को हालत पनि खास फरक छैन । साम्राज्ञीको ‘तिमी सँग’ले पनि बक्सअफिसमा गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेन ।
हुन त, निर्माता र कलाकारको आपसी समझदारीमा पारिश्रमिक लेनदेन हुँदा टाउको दुखाइरहनु नपर्ला । तर यसरी कलाकार र फिल्मको व्यापारको तादम्यता नमिल्दा अहिलेको पारिश्रमिक दर दिगो र टिकाउ होला त ? सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । एक निर्माता भन्छन्, ‘पटके निर्माताले भाउमा मनोमानी गर्दा नियमित फिल्म बनाउने निर्मातालाई संकट पर्न थालेको छ । तर यो प्रवृति लामो समय टिक्न मुस्किल छ ।’